Vaovao - Jiro ivelany: fironana 3 manova ny sehatra
Jiro ivelany: fironana 3 manova ny sehatra
Amin'izao fotoana izao, ny tanàna no dingana lehibe miseho ny fiainam-bahoaka. Raha heverintsika fa ny ankamaroan'ny mponina manerantany dia miaina afovoan-tanàna ary mitombo io fironana io dia toa ilaina ny manadihady ny fomba nanovana ireo toerana ireo ary inona ny fanamby atrehin'ny jiro.
Mampifandanja indray ny refin'ny olombelona amin'ny habaka ivelany, na ho an'ny besinimaro na ny tsy miankina, dia nanjary tanjon'ny paikady an-tanandehibe natao mba hahatonga ny tanàna honenana, toerana maharitra sy azo antoka ho an'ny rehetra.
Tato ho ato, ny fandrindrana ny tanàna dia nivoatra tamin'ny maodely iray izay ivon'ireo hetsika isan-karazany ny mponina ao aminy. Ny rafitra an-tanàn-dehibe dia manana singa miasa sy fientanam-po izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fifandraisana amin'ny habaka samihafa ary ny jiro dia mitana andraikitra lehibe.
Fironana amin'ny jiro ivelany
Ny jiro dia singa iray manan-danja ao anatin'ireto foto-kevitra vaovao ireto noho ny mety ho singa manova ny habaka. Jiro ivelany dia misy rindran-jiro miasa mifantoka amin'ny fanomezana fahitana marina an'ireo hetsika natao teny amin'ny toerana malalaka, ary koa ny jiro haingon-trano izay mifantoka amin'ny fampivoarana ireo endrika izay mandrafitra ity tontolon'ny tanàna ity.
Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo, ny jiro arsitektur dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fahazarana, fitondran-tena ary ny fomban'ny mpampiasa, raha toa ka mahomby sy manaja ny tontolo iainana, mampiasa luminaire tena mahomby ary hialana amin'ny fandotoana maivana amin'ny alàlan'ny fifehezana optique mety hisorohana ny famoahana avo sy hazavana ambiny.
Ny famolavolana jiro dia fifehezana mitohy tsy mitsaha-mitombo izay mitady hanome izay ilain'ny mpampiasa. Amin'io lafiny io, mahaliana ny mijery ireo fironana lehibe amin'ny sehatra.
Fanavaozana ny toerana an-tanàn-dehibe ho an'ny mpandeha an-tongotra
Tolo-kevitra vaovao no aroso miaraka amin'ny tanjona ny hamolavola ny habakabaka an-tanàn-dehibe, toy ny fanitsakitsahana ny arabe sy ny afovoan-tany, ny fametrahana ny faritra misy ny fifamoivoizana voafetra ho an'ny mpandeha an-tongotra, na ny famerenana ireo tontolo semi-public ary ny fampifanarahan'izy ireo ho an'ireo mpampiasa.
Amin'ity scenario ity, ny jiro dia lasa singa manan-danja afaka:
● Mitarika ny olom-pirenena hampiasa habaka
● Fiantohana ny fiarovana
● Manasokajy ny fivezivezin'ny mpampiasa hahasoa kokoa ny fiaraha-miaina
● Fanatsarana ny maritrano mamolavola ny habaka
Mba hamenoana ny filan'ny jiro amin'ireo mpandeha an-tongotra dia misy ireto typology luminaire manaraka ireto: Recessed, wallwasher, spotlight, bollards na Wall Light izay manatsara ny tontolon'ny tanàn-dehibe ary manampy fampahalalana hafa amin'ny habaka amin'ny alàlan'ny jiro.
Fanapahana ny habakabaka an-tanàn-dehibe
Manjavozavo ny fetra mahazatra eo amin'ny sehatry ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina. Mba hokolokoloina dia tsy maintsy lasa trano onenana ny tanàna, mamorona toerana manasa azy ireo aorian'ny filentehan'ny masoandro. Noho izany ny jiro dia manjary lasa mahasoa kokoa sy manakaiky kokoa ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny famoronana atmosfera sariaka kokoa sy mandray olona miaraka amin'ny luminaires izay miditra ao amin'ny habakabaka.
Izany dia miteraka jiro mahomby kokoa noho ny luminaires miaraka amina fizarana hazavana manokana. Ity fironana ity dia manohana ny fampiasana luminaires ivelany miaraka amin'ny mari-pana loko mafana.
Ny maharitra dia ny fototry ny volavolan-tanàn-dehibe izay efa lasa zava-misy. Ny tanàna manan-tsaina dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny mponina avy amin'ny fomba fijery ara-tsosialy, tontolo iainana ary miasa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny Teknolojian'ny fampahalalana sy fifandraisana. Noho izany, ny fifandraisana dia ilaina amin'ny fampandrosoana ity karazana habaka ity.
Ny jiro dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny fampandrosoana ny tanàna manan-tsaina. Ny rafitra jiro manan-tsaina dia ahafahan'ny fandidiana, ny fanaraha-maso ary ny fitantanana ny jiro amin'ny tanàn-dehibe amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fifandraisana tsy misy tariby. Amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia fanaraha-maso lavitra, azo atao ny mampifanaraka ny jiro amin'ny filana manokana ny toerana tsirairay rehefa manatsara ny vidiny ary manome fahaiza-manao sy fifandraisana bebe kokoa.
Noho io fomba fahazoana ny habaka io dia manazava ny mombamomba azy ireo ny tanàna. Ny fahasamihafan'ny habaka, mifanaraka amin'ny filàna ara-tsosialin'ny mponina, dia mandray anjara amin'ny fanovana ara-kolontsaina ary mandrisika ny fiadanan'ny olom-pirenena.
Araka izany, ny fampifanarahana ny rafi-jiro eny ivelany amin'ny habaka samihafa mandrafitra ny tanàna dia iray amin'ireo fironana lehibe indrindra amin'ny sehatra. Ny fahombiazan'ny famolavolana jiro tsara dia miankina amin'ny fahafahany mamaha ny filan'ny mpampiasa, ny fihetsem-po ary ny fiaraha-monina.